२६५८.७४ विन्दुमा नेप्से, ७ अर्ब २९ करोडभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री
चैत २३, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १ दशमलव १३ अंकले बढेर २ हजार ६५८ दशमलव ७४ विन्दुमा पुगेको छ ।
यसदिन कारोबारमा आएका २१२ ओटा कम्पनीको १ करोड ५८ लाख ५३ हजार ९९३ कित्ता शेयरको ७३ हजार ५९८ पटकमा रू. ७ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ६० हजार १५६ बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यो दिन चार ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले वृद्धि भएको छ । सोमावर एनआईसी एशिया लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९९ प्रतिशत, राधी विद्युत् कम्पनीको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत,वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स शेयर मूल्य ९ दशमलव ७७ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
सोमवार सर्वाधिक कारोबार अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको भएको हो । कम्पनीको रू. ३४ करोड ७५ लाख ६८ हजारभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कम्पनीको शेयर प्रतिशेयर रू. ९०८ पुगेको हो ।
त्यसैगरी सबैभन्दा बढी गोर्खाज फाइनान्सका शेयरधनीले गुमाएका छन् । कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४ दशमलव १२ प्रतिशतले कमि आएको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४८९ मा झरेको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये होटल एण्ड टुरिजमको ३ दशमलव २४ प्रतिशत, व्यापार समूहको २ दशमलव ९९ प्रतिशत, जलविद्युत समूहको १ दशमलव ८५ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत,अन्य समूहको १ दशमलव ५८ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ ।
बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशलमव ८४ प्रतिशतले कमि आएको हो ।
नेप्सेले सूचकको आधारमा यस अघिका रेकर्डलाई ब्रेक गरेको छ । सोमवार बजार खुलेको केहि समयमै २ हजार ६८९ दशमलव १९ विन्दुमा पुगेको थियो । नाफा बुक गर्नेहरु हावी हुँदा यो दिन कारोबार केहि सुस्त देखिएको हो ।
बजार बढ्न थालेसँगै ट्रेडरहरु हावी भएको देखिन्छ । यद्यपी सोमवारको बजार बन्द भएको अन्तिम विन्दुमा पनि अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
आइतवार पहिलो घण्टामा ०.०३% ले घट्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, ५]
सामान्य अंक घटेको बजारमा ज्योति लाईफ र दिव्यश्वरी हाइड्रोको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि [२०७८ बैशाख, ५]
तीन कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ६१.११ विन्दु बढ्यो, २३ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री[२०७८ बैशाख, ४]
आइतवारदेखि १४ करोड लिटर पानी
माथिल्लो तामाकोशीबाट वैशाखदेखिनै विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी
आविष्कार केन्द्र र उद्योग संगठनबीच सहकार्य हुने
कर्णालीका नवनियुक्त तीन मन्त्रीद्वारा शपथग्रहण
गाउँपालिकाको भवन बनाउन साढे १२ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन